Barnaamijka sal-dhigashada ee Xafiiska Shaqada | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad doonaysid inaad shaqayso / Barnaamijka sal-dhigashada ee Xafiiska Shaqada
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 6 7 2018
Waxaa jirta taageero gaar ah kana timaada Xafiiska Shaqada looguna talogalay adigaaga dhawaan helay sharciga daganaansho. Tani waxaa lagu magacaabaa barnaamijka sal-dhigashada. Hadafku barnaamijka sal-dhigashada waa inaad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u barato iswiidhishka, u hesho shaqo oo lacag gaar kuu ah u hesho.
Akhri dheeraad ku saabsan hawlaha ku jira barnaamijka sal-dhigashada oo ku taala bogga Xafiiska Shaqada.
Heshay shaqo ama bilowdid waxbarasho xilliga wakhtiga aad ku jirtid barnaamijka sal-dhigashada.
Haddii aad ku jirto fasax waalidnimo xilliga wakhtiga barnaamijka sal-dhigashada waxaad dib u qaadan kartaa wakhtigii lumay. Adigu waxaad dib u qaadan kartaa ugu badnaan 12 bilood.
Haddii aanad soo dhigan iskool dalkaagi ama aad haysato waxbarasho kooban waa inaad wax ku barato Iswiidhan. Tani waxaa lagu magacaabaa waajibka waxbarasho.
Xafiiska Shaqada ayaa kaa caawinaya inaad hesho waxbarasho adiga kugu haboon.